Barnaamijyada Al-Saadicuun Bil-Xaq
Waa Barnaamij taxane ah oo ay Culimada Jamaacada Al-Saadicuun Bil-Xaq ee Soomaaliya ku falanqaynayaan ugana Jawaabayaan iswaydiimahii Dadwaynuhu ka Qabeen Jameecada Laf-ahaanteeda iyo Dacwadeeda intaba .
Waa Barnaamij cusub oo taxane ah oo ay soo bandhigi doonto Jamaacada Al-Saadicuun Bil-Xaq bisha barakeysan ee Ramadaan. Barnaamijkaan oo lagu wareysanayo xubno ka tirsan Jamacaada wuxuu soo gali doonaa
Sidaan Ku Sadcinay ama "الطَّريقُ إلى الصَّدعِ" waa barnaamij taxane ah oo lagu wareysanayo xubno ka tirsan jamaacada Al-Saadicuun Bil-Xaq. Waxaa barnaamijka loogu kuurgaliyaa geedi-socodka iyo sooyaalka jamaacada Al Saadicuun
Waa Barnaamij lagu waraysanayo Xubno ka tirsan Jamaacada Al-Saadicuun Bil-Xaq oo sharaxaya qaabka & sida ay kusoo haleeleen HANUUNKA .
Ustaad Sayid Qutb Allaha u naxariistee - mujadidkii dhaqdhaqaaqa islaamigaa ee qarinigii labaatanaad – wuxuu kitaabkiisii Tusmooyinka Dhabbaha (معالم في الطريق ) ka dhaliyay caalamkoo idil dood ballaaran. Kitaabkiisaas oo
"#Sidaan_Ugu_Barbaaray_Jamaacada" ama "هكذا_ تربيت#" waa barnaamij lagu wareysanayo dhallinyaro ka tirsan jamaacada Al-Saadicuun Bil-Xaq. Waxa ay soo bandhigayaan sida jamaacadu ay islaamka ugu barbaarisay iyo waddada jamaacada ay u qaadday